Ise ígwè (Tianjin) Tech CO., LTD emi odude ke Daqiuzhuang, Tianjin, nke bụ nnukwu welded anwụrụ mmepụta isi ke world.After afọ nke ịrụsi ọrụ ike, anyị kpụrụ a ọgwa na ego ụkpụrụ nke mmepe, na na dị na chọrọ nke ọhụrụ ụlọ ọrụ mmepụta, anyị nyere full play ka ha onwe ha uru iji nweta ihe ọnụ ọgụgụ, Ọdịdị, ogo na arụmọrụ n'ozuzu nkwalite.
Anyị emewo ego maka ụfọdụ ígwè anwụrụ emepụta na ugbo griin haus factory.We na-pụrụ iche na-ere galvanized ígwè ọjà, na-ekpo ọkụ akpọrepu ígwè ọjà, greenhoues na on.After ọtụtụ afọ nke mmepe, anyị bulid a ogologo okwu
imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa si karịa 70 mba nke ụwa, dị ka Canada, Australia, Singapore, Thailand, Korea, Vietnam, Mexico, Chile, Peru, New Zealand na na. Kwa afọ mmepụta bụ 0,70 nde tọn.
Anyị na-enye onye-nkwụsị trading ọrụ, gụnyere: imewe, kwuru, nnyocha, mbukota, nnyefe na echichi ka izute mkpa nke anyị ahịa.
Anyị nwere ọtụtụ ndị magburu onwe ahụmahụ staffs.Our oru otu agwakọta elu technology inye draft aghụghọ na oru oma oru ngo solutions.And anyị mba ahịa mkpara nwere ike idozi gị ajụjụ na ọkachamara knowledge.Our ahịa ga-mgbe niile na-emeso na-akwanyere dị ka anyị na-emezu ihe ọ bụla e ji mara gị onye mkpa.
Anyị ụlọ ọrụ mgbe niile na-ekwusi na lanarị site quality ma mgbe niile mere ndị ọhụrụ na management na nkà na ụzụ, ma anyị na-guzosie ike a ụda na nkà mmụta sayensị management na àgwà nkwa system.And ihe mgbaru ọsọ anyị na-eke ndị kasị mma ụlọ ọrụ anya maka ndị ahịa na "Best Price, Igbo Quality, Fast nzipu, Professional Service "
Anyị nwere olileanya na ị ga-atụkwasị anyị obi gị oru na anyị nwere ike iru a na-anọ ogologo oge mmekọrịta together.FIVE ígwè (Tianjin) Tech CO., LTD bụ otu n'ime gị kasị atụkwasị obi soplaya na China!